Padaethar - Page2of 383 -
မိဘေခြၽးနဲ႔ေျခေဆးၿပီး ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ စေတးေနၾကသလိုျဖစ္ေနတယ္ မိဘေခြၽးနဲ႔ ေျခေဆးကာ ဘဝကို မစေတးမိၾကေစခ်င္…ဒီေခတ္လူငယ္အခ်ိဳ႕ဟာ မိဘေခြၽးနဲ႔ေျခေဆးၿပီး ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ စေတးေနၾကသလိုျဖစ္ေနတယ္။ မိဘေခြၽးနဲ႔ ေျခေဆးကာ ဘဝကို မစေတးမိၾကေစခ်င္…… ဒီေခတ္လူငယ္အခ်ိဳ႕ဟာ မိဘေခြၽးနဲ႔ေျခေဆးၿပီး ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ စေတးေနၾကသလိုျဖစ္ေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြပါပဲ။ မိဘေတြက ကိုယ့္သားသမီးေတြပညာတတ္ၿပီး ဘဝမွာလူတန္းေစ့ေနႏိုင္ေအာင္ ေနပူမိုး႐ြာမေရွာင္႐ုန္းကန္ရွာေဖြၿပီး ေက်ာင္းထားၾကရတာမ်ားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္သားသမီးေတြကေတာ့မိဘေတြကိုမငဲ့ညႇာဘဲ အသိမဲ့စြာအေပ်ာ္အပါးမွာပဲနစ္မြန္းေနၾကတယ္။ ေက်ာင္းေတြ တကၠသိုလ္ေတြဟာ အခ်ိဳ႕ေခတ္လူငယ္ေတြအတြက္ ပညာရွာရာမဟုတ္ဘဲပ်က္စီးရာေနရာလိုျဖစ္ေနပါၿပီ။ဒကာတစ္ေယာက္က ေလွ်ာက္တယ္။ ခုေခတ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ မလြယ္ဘူးဘုရား၊တကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္တယ္သာ ေျပာတာဘုရား၊အမ်ိဳးမ်ိဳး ပ်က္စီးေနၾကတာဘုရားတဲ့။ လိုက္ထရပ္ကားနဲ႔ အႀကိဳအပို႔လုပ္ေနတဲ့ ကားသမားကို ဘယ္ေလာက္ေပးမယ္လို႔ေျပာၿပီးေတာ့ ျပင္ဦးလြင္ကို ပို႔ခိုင္းတယ္။ ဟိုမွာ ကဲၾကတယ္။ ေနာက္ေန႔ မုံ႐ြာပို႔ခိုင္းတယ္။ ေက်ာင္းမတက္ပဲ အဲလိုေတြ လုပ္ေနၾကတယ္ဘုရား။ဒီလမ္းေလးအတိုင္း (ကားေမာင္းရင္း ဒကာကၫႊန္ျပ) လိုက္သြားရင္ ငွက္ေပ်ာေတာရွိတယ္ဘုရား၊အဲဒီမွာ … Read more
ေကာင္မေလးက ဘာေျပာလိုက္လဲဆိုေတာ့… “ကိုႀကီးအိပ္ေနတာ မႏႈိးရဲဘူး”တဲ့
ဆန္ဒကို သိက္ခာနဲ့ ထိန်းပါ ညီမလေး။ ကျားဆိုတဲ့သတ္တဝါတွေက ယုံမှတ်လို့ ပုံအပ်မိတာနဲ့…..
ချစ်သူရည်းစား ဘဝမှာ ချစ်သူရည်းစားလိုပဲနေစမ်းပါ ညီမလေးရာ။ ယောင်လို့တောင် လင်မယားလိုတော့ မနေချင်စမ်းပါနဲ့။ စိတ်ကူးတောင် မယဉ်မိစေနဲ့။ ဆန္ဒကို သိက္ခာနဲ့ ထိန်းပါ။ ကျားဆိုတဲ့သတ္တဝါတွေက ယုံမှတ်လို့ ပုံအပ်မိတာနဲ့အကုန်ခက်အောင် လုပ်သွားတဲ့ အဆီစားအသားပါမျိုပြီး အသွေးပါ သောက်တဲ့အမျိုး။ အစာဝလို့ ဌာနပြန်ချင်ပြီဆိုSorry ပါဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးတောင်ဝတ်ကျေတမ်းကျေ ပြောတာမဟုတ်ပဲ……. သစ်စိမ်းချိုး ချိုးပြီး ပစ်သွားတတ်ကြတယ်ဆိုတာကိုယ့်အရင်က အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ဘူးတဲ့ စီနီယာ မမတွေကို မေးကြည့်ရင် သိမှာပါ။ လင်မယားတိုင်းဟာ ချစ်သူလို နေလို့ရပေမယ့်ချစ်သူတိုင်းကတော့ လင်မယားလိုနေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်တယ်ဆိုတိုင်း အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်နေဖို့မှ မဟုတ်တာ။ အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်တယ်ဆိုတိုင်းလည်းဘဝကိုပုံအပ်ပြီး တစ်သက်လုံးက အတိမ်းအစောင်းမရှိ တန်ဖိုးထားပြီး ထိန်းသိမ်းလာခဲ့တဲ့ အပျိုစင်ဘဝကိုစတေးပြစ်ဖို့မှ မဟုတ်တာ။ ယုံမှတ်လို့ ပုံအပ်ပြီးကာမှ ယုံကြည်မူတွေကအကောင်ထည်ပေါ်မလာရင် အကုန်ခတ်ကုန်မှာပဲ။ ချစ်တယ်ဆိုတိုင်းလည်း … Read more
သင်သာ စနေသားသမီး တစ်ယောက်ဆိုရင်
အမှန်တရားကိုပြောရင် လူတိုင်းလက်မခံချင်ကြပါဘူး စနေ ဆိုသည်မှာ စိတ်ကြီးတယ် …. ဒေါသဖြစ်လာရင် ဘယ်သူကိုမှ ဘယ်အရာကိုမှ ထည့်မစဉ်းစားဘူး ထည့်လဲမတွက်တတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြောပီးလုပ်ပီးသွားလို့ သူမှားနေတဲ့ကိစ္စကိုလဲပြန်တောင်းပန်ဖို့ ဝန်မလေးတတ်ကြဘူး။ စိတ်နာအောင်တော့ လာမလုပ်နဲ့ သေတဲ့အထိ မှတ်ထားတတ်တယ် အငြိုးအတေးလဲကြီးတယ်။ အပေါ်ယံခင်မင်တာ မလိုလားဘူး သူငယ်ချင်း အစစ်ပဲ လိုချင်ကြတယ်။ ယောင်လို့တောင် စနေကို အရွဲမတိုက်မိစေနဲ့ သူများတွေ ရွဲ့တာထက် အဆပေါင်းများစွာ ပြန်ရွဲ့တတ်တယ်။ သနားအောင်ပြောလာရင် အိတ်ထဲရှိတဲ့ ပိုက်ဆံ မသုံးရရင် နေပါစေ ပေးပြစ်တတ်တယ်။ မပေးချင်ဘူး ကြည့်မရဘူးဆိုရင် အဲ့လူဘာဖြစ်နေပါစေ လှည့်ကိုမကြည့်တော့ဘူး။ လိမ်တာ ညာတာ အရမ်း မုန်းတယ် ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းများ အပေါ်တော့ ဟာသတွေ ရယ်စရာတွေပြောပြီး စနောက်တတ်ကြတယ်။ အနေအေးတယ် တခြားသူတွေကိုဆို ပြုံးပြဖို့မပြောနဲ့မျက်နှာထားက … Read more
အနာအဆာပါတိုင်း တန်ဖိုးမဲ့တယ်ဆိုရင် ဆန်ထဲ ကြွက်ချေးပါလာရင်ဆန်အကုန်လုံးကို သွန်ပစ်မယ့်အစား ကြွက်ချေးကို ဖယ်စားသင့်တယ်အနာပါတဲ့ ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးက ဆာလောင်ငတ်မွတ်နေသူအဖို့ကတော့ အနာဖယ်ပီးစားတတ်ရင် အာဟာရဖြစ်မယ်။ ထို့အတူပါပဲ လူ့လောကမှာ လူလူချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာအားနည်းချက်ရှိသူအချင်းချင်း အပြစ်အနာအဆာတွေကိုအပြန်အလှန်ဖေးမတည့်မတ်ရင်း အနာအဆာကိုဖယ်ပီးပေါင်းသင်းတတ်သွားရင် အမြင်ကျယ်ပီး ရင့်ကျက်တဲ့ လူတွေဖြစ်လာမှာပါ။ အမြင်မတူပေမယ့် နှလုံးသားတူရင်သွေးမတော်သားမစပ် သူစိမ်းတွေတောင်လင်နှင့်မယားဆိုတာ ဖြစ်လာကြသေးတာပါပဲ။လောကမှာ တူညီတဲ့အရာတွေပဲ တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းစည်းလို့ရနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ဆန့်ကျင်ဘက် မတူညီတဲ့ အရာတွေကို ခွဲမရအောင်ပေါင်းစည်းထားတာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။အမြင်မတူတိုင်း ၊ ခံစားချက်မတူတိုင်း ၊ လိင်မတူတိုင်း ၊ခံယူချက်မတူတိုင်းရန်သူဖြစ်မသွားပါဘူး အဓိက လိုအပ်နေတာက အတ္တနည်းပီး ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိရင်ကမ္ဘာကြီးက ရွာကြီးပါပဲ။ credit to ဇင်းနစ်မကွေး အနာအဆာပါတိုင်း တန်ဖိုးမဲ့တယ်ဆိုရင် ဆန်ထဲ ကြွက်ချေးပါလာရင်ဆန်အကုန်လုံးကို သွန်ပစ်မယ့်အစား ကြွက်ချေးကို ဖယ်စားသင့်တယ် အနာပါတဲ့ ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးက ဆာလောင်ငတ်မွတ်နေသူအဖို့ကတော့ အနာဖယ်ပီးစားတတ်ရင် အာဟာရဖြစ်မယ်။ … Read more
အစွယ်လိုသူမိဖုရားတဲ့လား…. ကျမတကယ်လိုချင်ခဲ့တာက မင်းဆဒ္ဒန်ရဲ့အချစ်တစ်ခုတည်းရယ်ပါ
စူဠသုဘဒ္ဒါ မုန်းခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး ပြောရက်ကြတယ်…အစွယ်လိုသူမိဖုရားတဲ့လား….ကျမတကယ်လိုချင်ခဲ့တာက မင်းဆဒ္ဒန်ရဲ့အချစ်တစ်ခုတည်းရယ်ပါ… အင်ကြင်းပန်းမှာ ခါချဉ်လေးကပ်ရုံနဲ့ ကမ္ဘာအဆက်ဆက် သုဘဒ္ဒါမုန်းရက်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး… ပြိုင်ဘက်နဲ့ ယှဉ်ရင် အချစ်တွေအကုန်အစင် မရခဲ့လို့သုဘဒ္ဒါရင်မှာ နာကျင်ကြေကွဲခဲ့ရတာပါ…. ဒါတွေကို ရှင်နားလည်ရဲ့လား မင်းဆဒ္ဒန်…. ဟိမဝန္တာ တောင်စဉ်ခုနစ်ထပ်မှာကျမဟာ ရှင့်အတွက်ဆို အသက်ပေးဖို့လည်း အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ပါရက်နဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးပေးဆပ် ချစ်ခဲ့တာတောင် ရှင်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ဒုတိယ တဲ့လား….ဟင့်အင်း… ပထမချစ်ခြင်း မဟုတ်ရင် ဒုတိယအဖြည့်ခံတော့ ဘယ်မိန်းမသားကမှ မဖြစ်ချင်ဘူး…. မဖြစ်နိုင်ဘူး မင်းဆဒ္ဒန်… မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး… ဒုတိယ ဆိုတာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး မင်းဆဒ္ဒန်ရယ်…ကျမ ရှင့်ကို စိတ်နာတယ်…. ဟိမဝန္တာ လွမ်းရိပ်မြိုင်မှာ အမုန်းတွေ တစ်သီတစ်တန်းနဲ့ ကျမ ကျဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး…. အပယ်ခံတစ်ယောက်လို နာကျင်မှုမျိုးနဲ့ ကိုယ့်အချစ်ကို အဆိပ်ခတ်ပြီး ယိုင်နဲ့နဲ့နှလုံးသားတစ်စုံကို ဖက်တွယ်ရင်း … Read more
ထမင်းစားပြီး ပြီးချင်း တန်းအိပ်ရင် ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးများ
ထမင်းစားပြီး ပြီးချင်း တန်းအိပ်ရင် ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးများ ထမင်းစားပြီး ချက်ချင်း မအိပ်ရဘူးဆိုတာမျိုးကိုတော့ ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ သတိထားနေရဲ့ကြားက လုပ်လိုက်မိတဲ့ အမှားတွေဆိုတာ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ထမင်းစားပြီး ချက်ချင်းတန်းအိပ်ရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကို သိထားစေဖို့ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ရင်ပူရင်ဆာ ဖြစ်စေတယ် ပုံမှန်အားဖြင့် အစာအိမ်ထဲကနေ အစာတွေကို ခြေဖျက်ဖို့ acid ကို ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။ လူတွေက ပုံမှန်အနေအထားအတိုင်း နေတဲ့အခါ အစာခြေဖျက်တဲ့ အရည်တွေဟာ အစာအိမ်ရဲ့ အောက်ဖက်မှာ စုနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လှဲလျောင်းလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ အဲဒီ့အစာခြေအရည်တွေဟာ အစာအိမ်ရဲ့ ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အပိုင်းတွေကို ထိခိုက်စေပြီး ရင်ပူရင်ဆာဖြစ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်လာစေတာပါ။ ဒီလိုဖြစ်ပေါ်ခြင်းက ရင်ဘတ်နဲ့ လည်ချောင်းတွေမှာ နာကျင်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မပျော်စေဘူး … Read more
လူတိုင္းဓါတ္ဆားေရသာက္ၾကပါတယ္ ဓာတ္ဆားေရ ေသာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဒါေတြသတိထား
လူတိုင်းဓါတ်ဆားရေသာက်ကြပါတယ် ဓာတ်ဆားရေ သောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒါတွေသတိထား ဓာတ်ဆား ဆိုတာ ဘာလဲ…ဘာအတွက်သုံးတာလဲ)…ဓာတ်ဆားမှုန့်(Oral Rehydration Salts)ဆိုတာ…ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းနဲ့အကြောင်းအမျိူ းမျိူ းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရေဓာတ်နဲ့ဓာတ်ဆားများ လျော့နည်းခြင်းအတွက်ရေနဲ့ဖျော်သောက်တာပါ… ယခုလို အလွန်ပူပြင်းတဲ့အချိန်မှာ ချွေးထွက်လို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရေနဲ့ဆားဓာတ်တွေပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့အကောင်းဆုံးဆေးမှုံ့ပေါ့…(ဘယ်လိုဓာတ်ဆားသောက်ရင်အကောင်းဆုံးလဲ)မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးလုပ်ငန်းစက်ရုံကထုတ်လုပ်တဲ့ဓာတ်ဆား…နိုင်ငံတကာမှတင်သွင်းရောင်းချတဲ့ဓာတ်ဆားမျိူ းစုံ…အပြင်စျေးကွက်ထဲမှာ ရိုးရိုးဓာတ်ဆားများ/သစ်သီးစုံဓာတ်ဆားများ…အများအပြားရောင်းချနေပြီး တမျိူ းနဲ့တမျိူးအာနိသင်သိသာစွာကွာခြားခြင်းမရှိပဲ…အားလုံးကောင်းကြပါတယ်… အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး ကြာရှည်အထားခံတာကတော့…မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးစက်ရုံ(MPF)ကထုတ်တဲ့ ဓာတ်ဆားပါ…(ဓာတ်ဆားထုတ်ဝယ်ရင် ဘာတွေသိထားသင့်လဲ)ဓာတ်တားထုတ်ဝယ်တဲ့အခါပထမဆုံးကြည့်သင့်တာက သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်(Expiry date)ပါ…Date ကောင်းတာနဲ့တင်မပြီးပါဘူး…လတ်ဆပ်မှု့ရှိ/မရှိ လှုပ်ကြည့်ရပါမယ်…ကပ်နေရင်(သို့)အထဲကအမှုံ့အရောင်ပြောင်းနေရင် လုံးဝမသောက်သင့်ပါဘူး… (ဓာတ်ဆားထုတ်ကို ဘယ်လိုထားသိုရမလဲ…ဘယ်ရေနဲ့ဖျော်ရမလဲ)…ဓာတ်ဆားတထုတ်ကို ရေကျက်အေး(သို့)ရေတစ်လီတာ/ရေသန့်တဗူးနဲ့ဖျော်ရမှာပါ…သတိထားရမှာက ရေနွေးနဲ့မဖျော်ရသလို…ရေခဲသေတ္တာထဲကရေအေးနဲ့လဲမဖျော်သင့်ပါဘူး…ဓာတ်ပျယ်သွားတတ်လို့ပါ… ဓာတ်ဆားထုတ်ကို အေးပြီးခြောက်သွေ့တဲ့နေရာမှာ ထားသိုရမှာဖြစ်ပြီး…နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့နေရာတွေမှာမထားသင့်ပါဘူူး…ဓာတ်ဆားရည်ကို ဖျော်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းကုန်အောင်သောက်ရမှာဖြစ်ပြီး၂၄ နာရီထက်ကျော်သွားတဲ့ ဓာတ်ဆားရည်ကို သွန်ပစ်ရမှာပါ…(တစ်နေ့ဘယ်နှစ်ထုတ်သောက်ရမလဲ…ဘယ်လိုလူတွေမသောက်ရဘူူးလဲပုံမှန်အားဖြင့်ဓာတ်ဆားကို တစ်ရက်အများဆုံး ၂ ထုတ်သာသုံးသင့်ပါတယ်…၂ ထုတ်ထက်ပိုသောက်မိရင် ခန္ဓာကိုယ်ကပိုနေမဲ့ ဆားဓာတ်ကိုမစွန့်ထုတ်နိုင်ပဲသွေးတိုးရောဂါဖြစ်တတ်လို့ပါဓာတ်ဆားထုတ်ကို ဆီးချိူ /သွေးတိုးရှိသူတွေ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့မှသောက်သင့်ပါတယ်… (ဒါကြောင့်)တန်ဆေး လွန်ဘေးဆိုသလို … Read more
ကိုယ့္အမွားမပါဘဲ တကူးတကႀကီးထိုးႏွက္ေနတဲ့လူေတြၾကားထဲမွာရွင္သန္ဖူးလား…?? ကြၽန္မကေတာ့ ရွင္သန္ဖူးခဲ့ၿပီ…မေကာင္းတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကကိုယ့္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္လာသလိုမ်ိဳးကိုယ့္ေၾကာင့္ ကိုယ့္ေၾကာင့္ဆိုတဲ့ အေတြးေတြၾကားထဲမွာရွင္သန္ဖူးခဲ့ၿပီ…။ကိုယ္ေတာင္ဘာမွမသိလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာကိုယ့္ေၾကာင့္ဆိုၿပီး ေျပာဆိုေနတာေတြကိုႀကဳံဖူးခဲ့ၿပီ…။ ဒီလိုခံစားခ်က္ေတြကိုကြၽန္မဘယ္လိုတြန္းလွန္ရမလဲ မသိဘူး..ကိုယ့္ထက္အႀကီးေတြဆီကအကူညီေတြလည္း အမ်ားႀကီးယူခဲ့ရတယ္.. ေျပာစကားေတြအမ်ားႀကီးနားေထာင္ခဲ့ရတယ္။။တြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အေျဖကေတာ့ကိုယ္မလုပ္တဲ့ အမွားတစ္ခုအတြက္ကိုယ္လိုက္ခံစားေနဖို႔ မလိုသလို အျပစ္ရွိသလို ခံစားဖို႔လည္း မထိုက္တန္ဘူးဆိုတာပါပဲ…။ေလာကမွာရွိသမွ် အမွား‌တိုင္းကကိုယ္တစ္‌ေယာက္တည္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို သိရမယ္…။ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အျပစ္တင္တာေတြကိုရပ္ရမယ္…။ ကိုယ့္ရဲ႕ျဖစ္တည္မႈကို ကိုယ္တိုင္တန္ဖိုးထားရမယ္ဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွလာၿပီးတန္ဖိုးလာေလွ်ာ့တာကို ခံစရာမလိုပါဘူးကိုယ့္ဘ၀ကို ကိုယ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ လွလွပပျဖတ္သန္းပါ… crd unicode ကိုယ့်အမှားမပါဘဲ တကူးတကကြီးထိုးနှက်နေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာရှင်သန်ဖူးလား…?? ကျွန်မကတော့ ရှင်သန်ဖူးခဲ့ပြီ…မကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကိုယ့်ကြောင့်ပဲဖြစ်လာသလိုမျိုးကိုယ့်ကြောင့် ကိုယ့်ကြောင့်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကြားထဲမှာရှင်သန်ဖူးခဲ့ပြီ…။ကိုယ်တောင်ဘာမှမသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကြောင့်ဆိုပြီး ပြောဆိုနေတာတွေကိုကြုံဖူးခဲ့ပြီ…။ ဒီလိုခံစားချက်တွေကိုကျွန်မဘယ်လိုတွန်းလှန်ရမလဲ မသိဘူး..ကိုယ့်ထက်အကြီးတွေဆီကအကူညီတွေလည်း အများကြီးယူခဲ့ရတယ်.. ပြောစကားတွေအများကြီးနားထောင်ခဲ့ရတယ်။။တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဖြေကတော့ကိုယ်မလုပ်တဲ့ အမှားတစ်ခုအတွက်ကိုယ်လိုက်ခံစားနေဖို့ မလိုသလို အပြစ်ရှိသလို ခံစားဖို့လည်း မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာပါပဲ…။လောကမှာရှိသမျှ အမှား‌တိုင်းကကိုယ်တစ်‌ယောက်တည်းကြောင့် ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို သိရမယ်…။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်တင်တာတွေကိုရပ်ရမယ်…။ ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို ကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးထားရမယ်ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှလာပြီးတန်ဖိုးလာလျှော့တာကို … Read more